Colombia: Tondradrano ao Riosucio, Chocó · Global Voices teny Malagasy
Colombia: Tondradrano ao Riosucio, Chocó
Voadika ny 07 Desambra 2010 3:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, srpski, বাংলা, македонски, Español
Noresahan'ny fampahalalam-baovao tranainy ny toetrandro ririna tao Colombia teo ary ireo tambajotra sosialy kosa dia niresaka momba ny tondra-drano, ny fihotsahan'ny tany sy ny hazo niongotra hatramin'ny fotony nitranga tany. Ny fampahalalam-baovaom-pirenena dia mitatitra fa 28 amin'ny departemanta 32 ao Colombia no voadona; tao amin'ny Twitter, amin'ny alalan'ny kaontin'ny Territorio Chocoano (@chocoanos), nanaraka ny toe-draharaha sarotra ao amin'ny Departemantan'i Chocó ao avaratra-atsinanan'i Colombia, indrindra indrindra ao amin'ny fari-piadidian'i Riosucio.
Mitatitra ny Territorio Chocoano (@chocoanos):
Isaky ny mihetsika dia goavana foana ny zavtra iainana amin'ny voina mitranga ao Chocó noho ny fahavakisan'ny reniranon'i Atrato sy San Juan
Manampy ny Territorio Chocoano (@chocoanos):
Nandrakotra velarana efatra kilometatra toradroa tao amin'ny tanana afovoan'i Riosuicio (Chocó) ny rano #SOSColombia
Trano tondraky ny rano ao Riosucio avy amin'ny bilaogy Libreta de Apuntes – Creative Commons 3.0 License
Ao amin'ny bilaogy Mira Sysmaya [es], mizara vaovao maromaro avy any El Colombiano [es] ry zareo:
Dibo-drano i Riosucio. Tato anatin'ny 30 andro dia niakatra be izay tsy izy ny haavon'ny renirano Atrato isak'izay mirotsaka ny orana ary amin'izao fotoana dia efa mahatratra 3 metatra ny haavony, nitarika farafahakeliny trano 1200 tondraky ny rano.
Ilay lahatsoratra dia miresaka koa ny toe-draharaha ankapobeny ao Colombia:
Tamin'ny 18 Novambra lasa teo, ny Filoha Juan Manuel Santos, dia nanambara ny fa latsaka an-katerena ny departemanta 28 amin'ireo 32. Na izany aza, tsy manampy mihitsy ny governemanta hanatrarany ny tanjona ara-toekarena izay mitntina an-tapitrisa dolara maro izany.
Ao amin'ny bilaogy Libreta de apuntes [es] dia manoratra ry zareo:
Tsy misy voaresaka any anatin'ireo fantsom-baovao goavana izay zava-mitranga ao Riosucio (Chocó). Satria angamba mbola sahirana mandrakotra ny zava-doza kokoa mitranga any amin'ireo tanana akaikin'ny misy azy ry zareo.
Amin'ny fomba filàzany manokana, Darío Blandón solotena avy ao Riosucio dia mamintina ny zava-misy:
Darío Blandón, mpitondra tenin'i Riocuscio rdia mitatitra fa “tondraky ny rano ny tanàna manontoloa ary isan'izany ny arabe migodana mitondra mankany amin'ny tobin'ny Tafi-panjakana.
Ny tobim-pahasalamàna, ny sekoly fanabeazana fototra sy ny ambaratonga ambony dia samy tondraka avokoa. Tsy misy na trano iray aza hita eny ambonin'ny rano. “Eny ambaravarankely sy eny an-tafonttrano no mandositra ny tranony ny olona.”
Farany, amin'ny alalan'ny Twitter sy ny Facebook koa no mivezivezy ny sary iray avy amin'ny NASA. Miteny ho azy ny amin'ny anton'ny toetrandro ririnina teo aloha teo ilay sary. Daniel Urrea (@DanielUP) mizara ilay sary sy ny fomba famakiny azy io:
Tao amin'ny NASA dia nahita ry zareo fa, raha ny hita maso sy ara-bakiteny, dia lavabodin'ny planeta isika. http://bit.ly/e1xzvu (avy amin'i @Telemedellin)